PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-12-30 - UMasingana ubalulekile kwi-ANC
UMasingana ubalulekile kwi-ANC
INYANGA kaMasingana yinyanga ebaluleke kakhulu emlandweni we-ANC nekhumbuza abalandeli bale nhlangano ukuthi yakhiwa nini futhi kanjani. Kungalesi sikhathi lapho inhlangano inikeza khona umkhombandlela ngezinhlelo zayo nezikahulumeni kazwelonke ezizolandelwa ukuze kufezeke amaphupho esizwe.
Nokho-ke nonyaka likhulu kakhulu isasasa ngenkulumo yokuvula unyaka yaminyaka yonke ye-ANC eyaziwa ngeJanuary 8 Statement. Inhloso-ngqangi yayo ukuveza lezo zinto ezizobe zihamba eqhulwini onyakeni osuke uqalwa nokuyizona iqembu nohulumeni abasuke bezogxila kuzo ukuze izwe liye phambili. Isizathu sokuqala nengisibona sibaluleke kakhulu ukuthi unyaka ka 2019 uzoba unyaka wokhetho luka zwelonke nolwezifundazwe. Loko kusho ukuthi i-ANC kufanele isebenzise ubuchule ukuze inxenxe abavoti ukuthi basondele kuyo futhi bayivotele. Lokhu izokwenza ngokuthi igcizelele izinto ekwaze ukuzenza kuleminyaka eyedlule isezintanjeni ukuze ikhumbuze abavoti ukuthi ibasebenzele. Phezu kwalokho, leli qembu kulindeleke ukuthi lenze izethembiso kubavoti ngalokho elizobenzela kona uma liphumelela ukhetho.
Phela nakuba i-ANC inabalandeli abaningi futhi inamava ekuphatheni izwe, asikho isiqiniseko sokuthi izoluphumelelea ngamalengiso ukhetho lwango 2019. Okwenzeka ngokhetho lohulumeni basekhaya ngo 2016 kwathumela umyalezo othi kungenzeka noma ngabe yini okhethweni.
Isizathu sesibili esenza inkulumo ka 2019 ibe ngebaluleke kakhulu ukuthi umengameli we-ANC nowezwe uMnuz
Cyril Ramaphosa akakhethiwe ngokugcwele, uqedela ihlandla lalowo owaphoqeka ukuthi esule uMnuz Jacob Zuma.
Lokhu kuchaza ukuthi kuzodingeka asebenzise leli thuba ukuzithengisa kumalungu e-ANC nakubavoti baseNingizimu Afrika bonkana. Nakuba inkulumo ihlanganiswa ngokubambisana eqenjini iqiniso lithi abantu bazobe bebheke yena siqu sakhe.
Isizathu sesithathu ingcindezi ebhekene nayo i-ANC ukuthi iphumele obala ngezinto ezimbalwa. Phakathi kwazo singabala lokhu okulandelayo: udaba lomhlaba, inkohlakalo, isimo sezomnotho, izinga lobugebengu, namathuba emisebenzi.
Isizathu sesine ukuthi kuningi okwenzekile okuthinta ukuxhumana kweNingizumu Afrika namazwe omhlaba. Inkulumo kamengameli waseUSA uDonald Trump ngodaba lomhlaba eNingizimu Afrika nezigameko zakamuva ezithinta uNgqongqoshe uLindiwe Sisulu neRwanda ziphoqa ukuthi inkulumo ilethe ithemba ngokuqiniswa kwezokuxhumana phakathi kwezwe lethu namazwe omhlaba. Lokhu kubalulekile ikakhulu ngoba uhulumeni wenza imizamo yokuthuthukisa umnotho nokuheha abatshali zimali ukuze kwande namathuba emisebenzi.
Isizathu sesihlanu asihlangene ngqo nezwe lonke kodwa sithinta yona i-ANC nombimbi. Njengeqembu elibusayo i-ANC kufanele inikeze isiqiniseko kubalandeli beqembu nabavoti bonkana ukuthi ubunye eqenjini nakumbimbi yinto ezobekwa eqhulwini ukuze uhulumeni akwazi ukugxila ekunikezeleni ngezidingo emphakathini.
Inkulumo kamengameli uRamaphosa iyobe ayiphelele uma ingakhulumanga ngokhetho oluzayo luka 2019. Lokhu kubalulekile ikakhulu njengoba amazwe afana noDRC ekhombisa ukungenzi kahle ezindabeni ezithinta ukhetho kuze kuvalelwe abavoti abaningi ngaphandle. Kuze kube manje iNingizimu Afrika isakhombise ukwenza kahle ezintweni eziningi nasekulandeleni umthetho sisekelo. Yithuba elihle lali lokuba umengameli anikeze isiqiniseko kumazwe omhlaba ukuthi izwe lethu nohulumeni lizoqhubeka nokuwuhlonipha umthetho sisekelo ukuze lithole ukuhlonipheka ngaphakathi nangaphandle.
*USolwazi Bheki Mngomezulu usophikweni lomnyango wezifundo zepolitiki e-University of Western Cape. Ungumhlaziyi ozimele